Mohamed Sheikh – Page 3 – Puntland News
DEG-DEG:- DAAWO:-Soomaaliland oo ka jawaabtay hanjabaadii Xuutiyiinta
DEG-DEG: DHEGEYSO: Camey oo afka furtay kana hadlay colaada Gumburka iyo hadalkii Cabdiraxmaan Faroole kasoo yeeray iyo arrimo kale oo xasaasi ah.
Garowe (Puntlandnews) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, Cabdixakiin Camey ayaa si kulul u cambaareeyay dadka warbaahinta ka sheegaya inay gacmo kale hurinayaan colaadaha u dhexeysa beelaha walalaaha ee ka taagan degaanada kuyaala howdka koonfurta gobolka Sool. Madaxweyne ku xigeenka ayaa…
DEG-DEG: SAWIRRO: Nin caan ka ahaa magaalada Garowe oo Tooreey lagu dilay iyo ninkii dilay oo lasoo qabtay.
DEG-DEG: SAWIRRO: Nin caan ka ahaa magaalada Garowe oo Tooreey lagu dilay iyo ninkii dilay oo lasoo qabtay. Allaha Unaxariistee, waxaa shalay magaalada Garowe lagu dilay nin caan ka ahaa suuqa Inji, kaasoo ka ganacsan jiray iibka qudrada, sida…
DEG-DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay guddoomiyaha barlamaanka Puntland iyo xildhibaanada kalana hadlay arrimo culus.
Madaxweyne Farmaajo ayaa casumaad u sameeyey Guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan Baarlamaanka dowladda Puntland kuwaas oo Magaalada Muqdisho kaga qeyb galaya Shirka Wada tashiga Baarlamaanada heer Federaal iyo heer dowlad Gobeleed. Sidoo kale, casumaaddan waxaa qayb ka ahaa Guddoomiyaha Golaha…
December 25, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DEG-DEG:- SAWIRRO: Xabaalo wareed laga helay meelihii ay ku dagaalameen Soomalida iyo Oromada.
Wadanka Itoobiya waxaa lagasoo sheegayaa iska hor’imaadyo dhiig badan ku daatay oo u dhaxeeya dhinacyo kala duwan oo ku loolamayo gobollo wadankaasi katirsan. Xiisadaha u dhaxeeya dadka Soomaalida iyo Oromada ayaa wali lagasoo sheegayaa deegaanno katirsan gobollada Oromia iyo Somaligalbeed…
DEG-DEG:- Saraakiil iyo masuuliyiin ku qaraabanayay saxiixo madaxweyne Gaas oo lasoo ogaaday iyo booliiska oo amar lagu siiyay xabsiga dhigaan….
Waxa xabsiga loo taxaabey taliyihii laanta ilaalada canshuuraha Puntland, Sidoo kale waxaa xilkii laga qaadey sarkaal kale oo lagu sheegay derajadiisa maamulaha cashuuraha berriga ee gobolka Bari waxaana loo jarey waaran Boolisku ku soo qaban karo, kadib markii lagu qabtey…
DEG-DEG:- DAAWO: Xuutiyiinta oo ku dhowaaqay inay Gantaaladooda ku garaacayaan Hargeysa iyo Berbera iyo cabsidii ugu xooganayd oo lagasoo sheegayo….
DEG-DEG:- DAAWO: Xuutiyiinta oo sheegay inay Gantaaladooda ku garaacayaan Hargeysa iyo Berbera. Shiicaddii nabad diid ahayd ee Khumaini ka amar qaadan jirtay ayaa maanta u dhaaranaysa Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Hargaysa iyo Berbera. Shiicada Xuutiyiinta ee nabad diidka ah…
DEG-DEG: Maxaa ka cusub xeebta Garacad iyo qalab muhiim ah oo ay baddu soo caariday….
DEG-DEG: Maxaa ka cusub xeebta Garacad iyo qalab muhiim ah oo ay baddu soo caariday…. 2015 ayey ahayd markii wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha kaluumaysiga Puntland ay geeyen deegaan xeebdka Garacad degmada Jariiban sabeeya uu ku rakiban yahay layr ku shaqeeya…
DEG-DEG:- Ciidanka Beesha Bahrarsame oo sheegay inay Somaliland geynayaan Garowe.
December 23, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
DEG-DEG: Taliyaha ciidamada difaaca Puntland oo war culus kasoo saaray colaadaha gobolka Mudug iyo heshiiskii Galmudug iyo……..
DEG-DEG: Taliyaha ciidamada difaaca Puntland oo war culus kasoo saaray colaadaha gobolka Mudug iyo heshiiskii Galmudug iyo…….. Taliyaha Ciidamada Difaaca Puntland Jen Saciid Maxamed Xirsi (Saciid Dheere)oo Saxaafadda la hadlayay, ayaa sheegay in ay jiraan Dad reer Mudug ah oo…
December 23, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DEG-DEG: Akhriso: Madaxweyne Farmaajo oo sameystay la taliyihii saddexaad oo amni iyo siyaasiyiinta Mucaaradka oo lasoo sheegayo…….
Mudane Cabdi Saciid M, Cali ayaa loo magacaabay la-taliyaha cusub xagga amniga ee madaxweyne Maxamed Cabduulahi Farmaajo. Mr. Cabdi Saciid M, Cali oo la hadlay warbahainta ayaa xaqiijiyay, waxaa uu noqonayaa la taliyihii 3aad ee xagga amniga uu Farmaajo yeesho…
DEG-DEG: Akhriso: Beesha Tanade Daarood oo soo saartay go’aankii ay kaga baxday dowladda Puntland.
Beesha tanada daarood oo soo saartay go.aan mudo ay ku hawlanayeen *Tanade waxa ay soo saartay War-Murtiyeedkaan:-* *1. Beesha Tanade waxaa u caddaatay in aysan waxba ku lahayn Matalaadda, Go’aannada iyo Talooyinka Masiiriga ah ee Dowlad-Goboleedka Puntland, isla markaana ay…
Puntlandnews oo ogaatay sababta Farmaajo iyo Kheyre usoo booqan la’yihiin Puntland iyo xogo xasaasi ah oo la helayo.
Sida aan ognahay 6 Bilood uu Farmaajo Raysal Wasaaraha ahaa Muusan Booqadan Deegaanada Puntland Xiligaan la joogo mudadii ay jirtay Dowladda ay Farmaajo iyo Raysal-wasaare khayre hogaaminayaan waxa ay booqashooyin ku kala bixiyeen Dhamaan maamul Goboleed yada dalka oo Dhan…
DEG DEG:Xabsiyada Garowe oo la ciir ciiraya dhalinyaradii ugu badnayd & Rabshadihii shalay oo 40 qof lagu…..
Taliyaha saldhiga dhexe ee Garowe Dhamme Maxamuud Muuse Bile oo maanta shir jaraa’id ku qabtay gudaha magaalada Garowe ayaa sheegay xireen 40 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in ay door ku lahaayeen rabshado magaalada ka dhacay oo isugu jiray bur burin…
DEGDEG+SAWIRRO: Guddoomiyihii barlamaanka Puntland iyo xildhibaanadii ugu badnaa oo Muqdisho ka dagay kana qeyb galaya doorasho looga digay.
Guddoomiyihii barlamaanka dowladda Puntland, Axmed Cali Xaashi iyo xildhibaano oo uu hogaaminayay ayaa maanta Muqdisho, kadib uu Jawaari usoo diray diyaarad qaas ah. Guddoomiyaha barlamaanka iyo xildhibaanada la socda ayaa usii gudbi doona magaalada Baydhabo halkaas oo ay uga qeybgalidoonaan…
December 22, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DEG DEG:Puntlandnews oo heshay xogta Musharixiinta ugu cad cad Beesha Dhulbahante & Mashruucii Laascaanood + Musharax Kar Kaar…..
Waxaa dhowaan soo if baxday musharaxnimadda madaxweynaha Puntland muddo xiligeedu sii dhamaanayo xukuumadda haatan talada haysa ee madaxweyne Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas oo marar hore ka dhawaajiyey inuusan ka qayb geli doonin tartanka madaxtinimo ee Puntland sanadka 2019. Hayeeshee waxaynu…
DEGDEG: Dabcasar oo dalkii labaad lagasoo musaafuriyay lagunasoo celiyay Hargeysa, diidayna inuu diyaarada ka dego.
DEGDEG: Dabcasar oo dalkii labaad lagasoo musaafuriyay lagunasoo celiyay Hargeysa, diidayna inuu diyaarada ka dego. Cabdiraxmaan Dabcasar ayaa ku sugan saldhiga booliska madaarka Hargeysa ka dib markii saaka Jabouti ku soo celisay diyaarad shalay lagaga masaafuriyey Hargeysa. Shaqaalaha madaarka ayaa…
DEG-DEG: Akhriso: Jawaari oo la saftay mucaaradka Farmaajo soona saaray qoraal xasaasi ah oo ka hadlaya xildhibaanadii qaranjka dumiska lagu eedeeyay iyo digniin ku socota xeer ilaaliyaha.
DEG-DEG: Akhriso: Jawaari oo la saftay mucaaradka Farmaajo soona saaray qoraal xasaasi ah oo ka hadlaya xildhibaanadii qaranjka dumiska lagu eedeeyay iyo digniin ku socota xeer ilaaliyaha. Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) gudoomiyaha gobalka banaadir ayaa u qoray Xeer Ilaaliyaha…
December 22, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
DEG-DEG: Taliyihii ciidanka booliiska gobolka Cayn oo Garowe ku dhintay iyo dowladda Puntland oo ka hadashay…….
Taliiyihii ciidanka booliiska gobolka Cayn, Gaashaanle sare Maxamud Jaamac Cali Cilmi (khamriile), ayaa ku geeriyooday magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Taliyaha ciidanka gobolka Cayn, ayaa la sheegay inuu ugeeriyooday xanuun Dhejis ah oo kusoo booday, sida ay Puntlandnews u xaqiijiiyeen qaar…
DEG-DEG+Xog: General Siciid Dheere oo ka tagaya Puntland iyo dowladda federalka oo udiyaarisay shaqo kale oo culus…
Warar ay heshay warbaahinta Puntlandnews ayaa sheegaya in taliyaha Ciidamada difaaca Puntland, General Siciid Dheere loo Badalayo Qeybta 21 ee Ciidanka Xooga Dalka Soomaliyeed ee Xaruntiisu tahay Magaalada Dhuusa-Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. General Siciid Dheere ayaa haatan dowladda federalka…
(Bal eeg fadeexadaan) Guddoomiyaha maxkamada sare oo laga helay qoraalkii uu ku fasaxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, muujiyayna inay colaad kala dhexeysa Farmaajo iyo Kheyre.
Waxaani ma dowladnimaa? Ku:Gudoomiyaha Maxkamadda G/Banaadir Ujeedo:Amar Siideyn Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame. Gudoomiyaha Maxkamada G/banaadir ee warqadan ku socoto \_Vaxaa la amrayaa in aad Siideyso siyaasiga magaciisu sare ku xusan yahay maadaama loo balansan yahay in maxkamadda la…
DEG-DEG: Jawaari oo war culus kasoo saaray labadii xildhibaan ee dowladda federalka codsatay in xasaanada lagala noqdo.
DEG-DEG: Jawaari oo war culus kasoo saaray labadii xildhibaan ee dowladda federalka codsatay in xasaanada lagala no Guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Soomaaliya oo kulankooda maanta uu shir guddoominayay guddoomiye Jawaari ayaa ka hadlay sii amba qaadista ka doodista codsigii…
December 21, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Xulka kubada cagta Puntland oo haysta fursad ay koobka si fudud ugu qaadi karaan (Wax ka ogow)
Berri waxaa la soo gabagabeyn doonaa tartanka M/Gobolleedyada oo sanadkii labaad oo xiriira ka dhacaya caasimadda Soomaaliya, Muqdisho. Advertisement Waxaa kama dambeystiisa ku hardami doona markale Jubbaland iyo Puntland – sanadkii hore waxaa gool ku laadyo ku qaaday Puntland. Hadaba,…
Weriye Xaaskiisii u dilay arrin la yaableh iyo ciidanka amniga oo gacanta kusoo dhigay.
Wariye xaaskiisa u dilay in aysan soo dhamaystirin gabaatigii ay ka bixisay Radio lugo Badan Wariye Ilyasu ayaa lagu heley in uu xaaskiisa dilay sanadkii 2000 Wariye caan ah oo ka shaqeeya taleefishin ku yaala dalka Hindiya ayaa lagu heley…
DEG DEG:Beesha Habar Gidir oo siyaasiyiin caan ah ugu aar gudeysa dilkii askartii C/raxmaan C/shakuur & Magacyadooda oo…..
Warar hoose oo la helay ayaa shegaya in la diyaariyey Qorshe Ay Beesha Habar gidir ku dooneyso inay kaga aar gudato Xubno Shaar Dawladeed Soo xirtay oo qaab qabiil beesha ugu aar gudanayay. Waxa Ka dhacay Xasuuq Guriga C/raxmaan…
DEG-DEG: Madaxweyne Gaas oo gaaray Burtinle kuna dhowaaqay go’aan culus oo ku socda Dhulbahante iyo Cumar Maxamud iyo ciidankii Puntland oo galay…..
Madaxweynaha Puntland oo Gaadhay Buurtinle “waxaan ugu baaqayaa Shacabka Puntland inay nabad kuwada noolaadaan nabad kuwada daaqaan “. Madaxwenaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 21 December 2017 safar shaqo ku…
DEG-DEG: DAAWO: Cabdiraxmaan Shakuur oo xildhibaanada labada aqal ka dal baday inay sharciga la tiigsadaan madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre, sheegayna inuu bilaabayo……….
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay banaanka hore ee Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay guuleysatay Cadaaladda, kaddib markii maxkamadda ay go’aamisay in aanu wax dambi ah laheyn, dibna loogu soo celiyay xoriyaddiisa. C/raxmaan C/shakuur…
Daawo:War deg deg ah oo hada naga soo gaaray Buuraleyda Gal-Gala & 20 dhimashaa oo laga soo sheegayo…..
Ciidanka Aminiga Puntland (PSF) oo maalmahan hawlgallo ballaaran oo ka dhan ah cadowga Al Shabaab ka waday Buuraleyda deegaanada madarshoon, Karin Xagarood iyo Mariidleee Buuraha CalMadow oo saldhigyo ay ku dhuumaalaystaan ay ku leeyihiin Al Shabaab ayaa waxay ciidanka PSF…
DEG-DEG:- Dowlad goboleedyada oo war xasaasi ah kasoo saaray xarigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxweyne Farmaajo oo digniin….
Golaha iskaashiga maamul Goboleedyada ayaa qoraal ka soo saaray Xariga iyo siidaynta Abdirahman Abdishakur . Golaha Waxuu soo dhaweeynayaa siidayntii shuruudaysnayd ee lagu siidayey Abdirahman Abdishakur Warsame ka dib dadaalo ay u galeen golaha iskaashiga ,Wasiiro ,Xildhibaano ,duubab,odayaal iyo xubno…
DEG DEG:Deegaano muhiim ah oo ka tirsan Puntland oo ka baxay gacanta dowladda & Magaalada Boosaaso oo…….
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in xaalada magaalada Boosaaso ay kasii darayso marba marka kasii dambaysa kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhaceen gudaha magaalada Boosaaso iyo deegaanada ku xeeranba fal lidi ku…